Inqwelo moya kunye nemidlalo yokudubula, eminye iyonwabisa kwaye isimahla | Ubunlog
Inqwelo moya kunye nemidlalo yokudubula, eminye iyonwabisa kwaye isimahla Ubuntu
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga eminye imidlalo yenqwelomoya kunye nokudubula. Ubuntu bunika imidlalo yemixholo eyahlukeneyo. Kwaye ekubeni umsebenzisi engahlali nje kwimidlalo yezemfundo, phakathi kwezo zifumaneka koovimba bolu hlobo lokuhambisa sinokufumana ezonwabisayo nezonwabisayo, ezinje ngolu hlobo lweenqwelomoya kunye nokuqhushumba.
Yonke imidlalo esiza kuyibona ngokulandelayo tienen ilayisensi yesoftware yasimahla kwaye inokufumaneka kwindawo yokugcina ubuntu. Kule migca ilandelayo siza kubona inkcazo emfutshane nganye kunye nemiyalelo yokuzifaka.
1 Inqwelomoya yasimahla kunye nemidlalo yokudubula Ubuntu
1.1 Isongelo se-Astro
1.1.2 Khupha ngaphandle
1.2 IChromium BSU
1.2.2 Khupha ngaphandle
1.3.2 Khupha ngaphandle
1.4.2 Khupha ngaphandle
1.5 Isibhakabhaka esingapheliyo
1.5.2 Khupha ngaphandle
1.6 Vula abahlaseli
1.6.2 Khupha ngaphandle
1.7 MARS ukuhambelana namazwi
1.7.2 Khupha ngaphandle
1.8 UVal noRick
1.8.2 Khupha ngaphandle
Inqwelomoya yasimahla kunye nemidlalo yokudubula Ubuntu
Sisiphekepheke se3D kunye nomdlalo wedabi. Oku kukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso inqanawa yakho, kwaye uthenge / uthengise izixhobo ukoyisa zonke iintshaba kwaye woyise amanqanaba. Idlalwa ngemouse ukuhamba ujikeleze isikrini kunye nokudubula. Olunye ulwazi kwi Indawo yokugcina izinto zeGitHub.
Kulo mdlalo siza kusebenzisa inqwelomoya yenqwelomoya yanamhlanje. Kwi IChromium BSU Kuya kufuneka silumke singalahli onke amanqaku ezempilo ngelixa sitshabalalisa utshaba. Idlalwa kuphela ngempuku ukuhambisa inqwelomoya kunye nokudubula inqanaba leentshaba ngokwenqanaba. Musa ukudideka kwisikhangeli seChromium. Ulwazi oluthe kratya kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Lo ngumdlalo webhombu yesikolo esidala, kunye neemephu, imililo yangaphambili nangasemva, uninzi lwezithuba zesithuba, kunye neentshaba ezoyiswa. Inika ubomi be-5 ngaphandle kwamanqaku ezempilo, ke xa ungqubana notshaba, inqanawa yakho iya kutshatyalaliswa. Ulwazi oluthe kratya kwi iwebhusayithi yomdlalo.
Lo mdlalo wenziwe eArgentina. I-classic, i-arcade okanye i-SEGA isitayela somdlalo we-airplane kunye nezixhobo zokuthenga / ukuthengisa imisebenzi kunye namanqaku ezempilo. Singasebenzisa imouse ukuhamba nokudubula. Ngokuzenzekelayo, uphethe umpu wokuGattling, kodwa ungathenga iibhombu nemijukujelwa. Izixhobo azinasiphelo. Unokufumana ngakumbi ngalo mdlalo kwi iphepha lewebhu yalo
Ukuzonwabisa, urhwebo kunye nomlo wesiphekepheke onamabali amaninzi. Cinezela M ukujonga imephu kwaye ukhethe indawo oya kuyo, J ukutsiba, N ukukhetha isiphekepheke esikufutshane, ukongeza kwi TAB ukudubula. Ngumdlalo onzima xa uthelekiswa neminye, yiyo loo nto inomdla ukuyithatha jonga incwadana yemigaqo apho kuboniswe indlela yokudlala.
Lo mdlalo ukhumbuza kakhulu iminyaka yegolide ye-SEGA kunye neNintendo Consoles. Umdlalo weklasikhi kunye nowe-retro ukudubula zonke iintshaba ngesiphekepheke sethu. Sebenzisa iintolo zebhodi yezitshixo ukuhamba kunye Shift ukudubula, P ukunqumama kwaye Q ukuphuma. Yoyisa zonke iintshaba ukuvula izinto ezahlukeneyo ezitshixiweyo.
MARS ukuhambelana namazwi
Lo ngumdlalo okhethekileyo wokudubula indawo. Uya kususa isiphekepheke esilawulwa ngumxhuzulane ukutshabalalisa iziphekepheke zotshaba okanye ezomdlali wesibini. Iindidi zemidlalo eyahlukeneyo zinikezelwa kuwe, kubandakanya nomdlalo wokufa. Sebenzisa iintolo zebhodibhodi ukuhamba kunye noCtrl ukudubula. Unokwazi ngakumbi ngalo mdlalo kuye Indawo yokugcina izinto zeGitHub.
Okokugqibela, indawo enye eyonwabisayo. Kuya kufuneka bamba isitshixo Ctrl kwaye usebenzise izitshixo zotolo ukuhamba kwaye utshabalalise zonke iintshaba zasemajukujukwini.
Olu luhlu lwemidlalo yabantu abangenathemba ngamanye amaxesha, lugqityiwe kwi-en ubuntu, eyindawo endiyifumene kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Inqwelo moya kunye nemidlalo yokudubula, eminye iyonwabisa kwaye isimahla Ubuntu
Spivak, simahla kunye nomthombo ovulekileyo umdlali weqonga
IMobian, inguqulelo yeselfowuni kaDebian esinokuyisebenzisa phantse njengePC encinci